ट्रिपर ड्राइभर भन्छन् : ‘हामी हत्यारा होइनौँ’ « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
ट्रिपर ड्राइभर भन्छन् : ‘हामी हत्यारा होइनौँ’
मनबहादुरले टिपरको ब्रेक जोडले दबाएपछि बाइकवाला हातमा हेल्मेट बोकेर फर्कियो बूढो अनुहार देखेर हो कि बाइक वालाको मनमा के आयो कुन्नी औँला ठड्याएर भन्यो, “आँखा छैन ?” त्यसपछि ऊ फर्कियो ।
गठ्ठाघरमा बाइकवालाले यति धम्काएपछि मनबहादुरले कंलकीमा सामान अनलोड गरे । बाटाभर नै बाइकवाला दिमागमा आयो । एकमनले सोचे अरुको गाली खाएर मात्रै के काम गर्नु । छाड्दिउँ कि क्या हो । अर्को मनले सोचे कुन काममा चुनौती छैन र सबै काममा चुनौती छ नि । यही सोच्दासोच्दै उनी सामान लोड गर्ने ठाउँमा पुगे । अनिँदो रात साहूको लगातारको फोन बाटोको समस्या मनबहादुरले जीवनमै धेरै पटक सोचको कुरा मध्य एक यही हो कि साला जिन्दगीमा ड्राइभर नै किन बनेँ म ?
टिपरको कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा र सामाचारको मुख्य पृष्ठमा सँधै नै अटाएका छन् । टिपरको समाचार नयाँ होइन तर पूरानो पनि रहन सक्दैन । आम मानिसले भने अनुसार टिपरले दुर्घटना लगातार निम्त्याएको छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने सडकमा दुर्घटनाको चाप पनि टिपरकै कारणले भएको हो भनेर यकिन गर्न सकिन्छ । तर हरेक कुरामा दुई पक्ष हुने भएकाले गल्ती कसको धेरै रहन्छ भन्ने कुरा टिपर दुर्घटनामा गुमनाम नै रहन्छ । आयतनकै हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य सवारीको तुलनामा टिपरको आयतन ठूलो रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रत्येक दुर्घटनामा गल्ती जसकै भएपनि ठूला सवारीले दूर्घटनामा क्ष्तिपूर्ति बेहोर्नु परेको प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ ।
यता चालक समूह सधैँ पीरमा परेको नै बताउँछन् । समाचारले पनि सधैँ हामीलाई दोषी देख्ने र त्यही लेख्ने कुराले हामीलाई दुःखी बनाएको गुनासो गर्दछन् ।
टिप्परलाई यमराज भन्नेहरुको लर्को पनि ठूलै रहेको छ । विभिन्न तवरले उडाए पनि टिपरले समाजमा खेलेको भूमिका निकै सम्झन लायक भने छ । यो सत्य हो ।
महानगरीय ट्राफिक पहरीका अनुसार विगत २०७० बाट ७५ सम्ममा हेर्ने हो भने ७०र७१ मा ८९२ , ७१ र ७२ मा ९४७ , ७२ र ७३ मा १२१० , ७३ र ७४ मा १४०० , ७४ र ७५ मा १५८० टिपरसँग सम्बन्धित दुर्घटना घटेका छन् । दुर्घटनामा अधिकांस बाइक जोडिएको छ ।
उपत्यकाको टिपरलाई अध्ययन गर्दा भक्तपुरको सल्लाघारीमा लस्कर रहेर बसेका टिपरहरु साँझ आठबजेबाट प्राय खुल्ने गरेको भेटिन्छ ।
इमाडोलका बेलबहादुर राइले गाडी चलाएको २०५२ बाट हो । उनीले टिपरको स्टेरिङ समाएको चाहिँ १० वर्ष मात्र भयो । दिनको एक ट्रिप मात्र भ्याइने भएकाले उनलाई परिवार पाल्न धौ धौ नै छ । उपत्यकाभित्र साँझ आठबजे बाट मात्र टिपरको लागि बाटो खुल्ला छ तर यो पनि यसै खुल्छ भन्न सकिन्न चालक सदस्य भन्छन् सरकारको यो टिपर चालकलाई हेप्ने प्रवृति हो । त्यसो त उपत्यकाको सडकमा दिनमा टिपर नै नचल्ने पनि होइन तर त्यसको लागि पास आवश्यक छ । पास पाएपछि दिनमै टिपर सडकमा गुडाउन पाइन्छ ।
म नाम चाहिँ भन्दिन भन्दैन एक टिपर चालक भन्छन् – सरकारले हामी निमुखालाई हेपेको छ । पहुँचवालाले पास मिलाएर दिनमै गाडी चलाउन सक्छन् । हाम्रो ठूलो मान्छे छैन त्यसैले हामीसँग पास पनि छैन हामीले रातको आठबजे नै कुर्नु पर्छ तर त्यो आठ पनि ट्राफिकको मुडमा भर पर्छ । कहिले आठ , कहिले साडे आड , नौ र कहिलेकाहीँ दश बजे मात्र सल्लाघारीबाट ट्राफिकले टिपरलाई अनुमति दिन्छन् । धेरै पटक चालकहरु ट्राफिकसँग आमीलाई अन्याय भयो भन्दै न्याय खोज्न गए तर उनीहरुले उल्टै यो माथिको आदेश हो हामीलाई यो बारेमा केही थाहा छैन भनेर फर्काए ।
बेलबहादुर भन्छन् – पास पाउँदा चाहिँ मान्छे नै नमार्ने हो र ? कि पासले मान्छे मार्दैन । यो पङिक्त्कारलाई उल्टै प्रश्न गर्छन उनीहरु ।
बेलबहादुरले बुझे अनुसार उनीहरुलाई भनौ वा टिपर चालकहरुलाई सरकारले मान्छे गन्दैन । उनीहरुलाई हाम्रा नै जनता हुन भन्न सक्दैन । उनीहरुलाई त केवल हामीले मान्छे मार्छौँ भन्ने मात्र छ । तर हामी वास्तवमा हत्यारा भने होइनौँ ।
हाम्रो गल्ती नै हुँदैन भन्ने पनि छैन । हामी मान्छौ कि हाम्रो पनि गल्ती हुन्छ । तर ठूलो गाडी देख्दैमा ठूलै साधनको मात्र गल्ती हुन्छ भन्नेहरु चाहिँ मूर्ख मात्र हैनन् पटमूर्ख हुन् ।
यदि टिपरको मात्र दोष छ भने किन टिपरले बाटोमा हिँड्नेलाई हान्दैन , किन कारलाई ठोक्दैन , किन बससँग जुद्दैन , किन अरुसाग् दुर्घटना हुँदैन । जहिले बाइकलाई नै हान्नुपर्ने छ भन्ने केही छ र ? छैन नि । यहाँको नीति नियम सबैले नमानेर हो । दोषी त बाइकवाला नि छन् । तर उनीहरु यो मान्न तयार छैनन् ।
बेलबहादुर भन्छन् – टिपरको आयतन ठूलै हो हामी मान्छौ । दश टन भारी बोकेर त्यही बाइक हिँड्ने सडकमा हामी सँगैm हिँड्छौँ तर उनीहरुलाई कुदाउन कुनै लिमिट छैन । सयभन्दा उकालोमा उनीहरु दौडन्छन् । हामी भारी बोकेर ४० वा ५० कै स्पीडमा हिँडे पनि आवाज बढी आउँछ । आवाज ठूलो भएपछि स्पीडमा छ साधनजस्तो देखिन्छ । म राजा हुँ रोडको तरिकाले बाइकवाला कुदाउँछन् । नजिकै आए पछि ब्रेक त हान्नै पर्यो भारी बोकेको साधनलाई ब्रेक हान्न कति गाह्रो पर्छ । ब्रेकको सन्तुलन छिटो नमिल्ने भएकाले दुर्घटना बढेको हो ।
टिपरले नै सामान बोकेर बनाएको ससडक हो यो । अहिले उसैले चल्न बन्देज छ । सरकारले कार्यलय जान आउन कठिन हुने भएकाले यसो गरिएको हो भन्यो ठीकै छ तर कार्यलयमा कर्मचारी नै भेटिदैनन् भने आठबजे सम्म हामीलाई किन कुराउनु ? कुन कार्यलयमा आठबजे सम्म कर्मचारी बस्छ ? यसकारण हामी टिपर चालकलाई सरकारे अन्याय गरेको छ । टिपर चालकको एउटै माग छ कि हामीलाई बिहान नौ बजेबाट एघार बजेसम्म कुदाउन नदिनु र बेलुका चार बजेबाट छ बजेसम्म नदिनु । त्यो समयमा जाम हुन्छ मान्छौ । त्यो समयमा कुदाउँदैनौ ठीक छ तर अरु समयमा त कुदाउन दिनुपर्छ । नियम सबैलाई उत्तिकै र उस्तै लाग्यो र सबैले नियम माने भने न दुर्घटना हुन्छ न अन्याय हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : असार ८, २०७९ बुधबार १२ : २१ बजे
नाटक पढ्न तीन हजार बोकेर दिल्ली हानिएका रवीन्द्र झा
बेवास्ताका कारण बन्द भएको थियो नेपालमा ट्रली बस